Sida loo basaaso tartameyaalkana waxaan arki doonaa darajada iibka Amazon ee keywords keywords?
Aan tagno barta oo aan dib u dhac lahayn. Aqoonsiga muhiimada ilaalinta naftaada mar walba la cusbooneysiiyo isbeddelka ugu dambeeyay ee raadinta iyo isfahanka muhiimka ah ee ugu muhiimsan ee horay loo isticmaalo by dukaamayste kasta oo waqti-weyn leh oo leh sare u saray iibka iibiyaha - waxaa ku jira saddex qalab muhiim ah oo loo isticmaalo si aad u maamusho si siman, cilmi baaris tartan ah. Ugu dambeyntii, si aad u isticmaasho natiijooyinka ugu fiican iyo isku-dhafka muhiimka ah ee isku dhafan ee aad ugu guulaha badan ee aad ku guuleystay Amazon. Sidaas, halkan waa. Qorshaha Keydka Google - waa inuu ahaadaa qalabka ugu muhiimsan ee falanqaynta ee muhiimka ah oo si dhaqso leh u siin kara sawir weyn oo ku saabsan dhammaan ereyada muhiimka ah iyo nasashada isku-dhafka isku midka ah ee isku midka ah, kuwaas oo lagu xisaabiyaa xaddiga raadinta ee mashiinka raadinta ee adduunka. Waxyaabaha ay tahay in qalab this default default noqon kartaa aad u fiican aad - xitaa haddii aad u baahan tahay si loo dabagalayo darajada iibka Amazon for keywords gaar ah. Dabcan, Qorshaha Keyword keyword Google maaha mid toos ah sida qaybta libaax ee qalabka cilmi baarista tartanka iyo qaababka internetka oo si gaar ah loogu talagalay raadinta qadarka iibka Amazon ee keywords key target bartilmaameed. Si kastaba ha ahaatee, weli waxaan isticmaalayaa qalabkan caadiga ah, marka lagu daro si joogto ah. Waxa kale oo ay noqon kartaa meel fiican oo bilawga ah ee cilmi-baarista muhiimka ah ee tartanka ee Amazon. Si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, in isticmaalka qalabkan bilaash ah ee aan heli karno dhammaanteen nagu adkaan doonto inaad ku noqotid iibiye guuleysta Amazon. Waxaan u maleynayaa inaad u baahan tahay inaad qaadato ugu yaraan hal qalab oo dheeraad ah oo ka sarreeya kan isirka ah - markaa tixgeli fursadaha soo socda si aad ula socotid darajadaada iibiyaha ee shirkada Amazon ee ereyada muhiimka ah sida pro pro.
SpyFu - waa qalab falanqayn oo muhiim ah oo loogu talagalay in loogu talagalay in lagu soo bandhigo tartamayaashaada iyo ka faa'iideystaan ​​natiijooyinkooda ugu fiican oo leh cilmi-baaris muhiim ah oo la xidhiidha, laakiin leh dhinac kasta oo SEO ah waxaad u maleyn kartaa inaad malayn karto (i. e. , muuqaalka gadaasha, istaraatejiyadda guud ee wax-ka-qabashada, iyo sidoo kale waxqabadyo kale oo waxqabad oo loo isticmaalo faa'iidadaada). Oo si fudud ayaad u kici kartaa liiskaaga iibka ah Amazon for keywords bartilmaameedkaaga muhiimka ah - kaliya soo jiid dhammaan talooyinka dheer ee lagama maarmaanka lagama maarmaanka ah iyo si aad u qiimeeya tartanka tartanka si toos ah ka soo horjeeda soo horjeeda suuqyada suuqa ama gudaha qaybta wax soo saarka ee Amazon. Malaha waxa kaliya ee xun ee ku saabsan SpyFu waa in ay ka buuxdo dufanka buuxa ee loo heli karo wax ku dhow 30 bucks bishii. Si kastaba ha ahaatee, qaabka aasaasiga ah ee bilaashka ah ayaa ii fiicneyd, waa inaan qirto.
- waa qalab falanqayn oo muhiim ah oo muhiim ah oo kaa caawin kara inaad la socotid darajada iibka Amazon ee ereyada muhiimka ah iyo erayada raadinta dheer ee loo isticmaalo dadka isticmaala nolosheeda oo keliya ma'aha goobaha ganacsiga, laakiin meelo kale on internet-ka gudaha index-ka google. Iyada oo ka mid ah sifooyinka ugu coolest, Waxaan ku riyaaqay xawaare aad u sarreeya ee cilmi-baarista muhiimka ah tartanka. Wax kastaa wuxuu ahaa mid sahlan oo si habsami leh u socda. Iyada oo SECockpit, qof kasta oo iibiyaha ah ee Amazon si dhakhso ah u fahmi karaa waxa si fiican u shaqeynaya iyo waxa loo baahan yahay in wax laga beddelo ama laga yaabo in dib loo eego - sida laga soo xigtay natiijooyinka ugu muhiimsan ee ay horay u isticmaaleen ganacsadaha ugu muhiimsan ee qaybtaada ku yaala Amazon, sida eBay, Walmart, iwm Source .